Abenzi be-Module ye-LED | I-China LED Module Factory
I-Flexible LED Tape Dual Channel Colour Tunable Series
Incazelo Yomkhiqizo Ububanzi bephalethi yombala we-Dimm way dimmer color ngu-2700K-5700K. Imikhiqizo isetshenziselwa ukukhanyisa kwezebhizinisi nezicelo zokukhanyisa ezisemkhathini, futhi amandla ikakhulukazi yi-6W-30W. Isicelo: ukukhanya kwezebhizinisi, okufana namalambu aphansi, izibani zasemkhathini, izibani ezikhanyayo, nezinye izikhathi ezidinga ukulungiswa kwesimo somoya, imakethe yokuhlinzeka ngamakhaya - esekwe njengamalambu asekhaya, amalambu aphansi, amalambu odonga, amalambu etafula eliseceleni kombhede nokunye ku-Flexible LED Tape Dual Channel Colour Tunabl. ..
Ukukhanya kwangemuva kwe-LED kubhekisa ekusetshenzisweni kwe-LED (i-diode-emitting diode) njengomthombo wokukhanya emuva wezikrini ze-LCD. Uma kuqhathaniswa ne-CCFL yendabuko (ebandayo i-cathode tube) umthombo wangemuva, i-LED inezici zokusetshenziswa kwamandla okuphansi, inani eliphansi le-calorific, ukukhanya okuphezulu nokuphila okude, okulindeleke ukuthi kuthathe indawo ngokuphelele yohlelo lwangemuva lwendabuko eminyakeni yamuva Ukukhanya kwe-backlight ye-LED iphezulu, futhi ukukhanya kwe-backlight ye-LED ngeke kwehle isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, i ...
Incazelo yomkhiqizo Imikhiqizo yemojula yokukhanyisa ye-AC ye-ShineOn isuselwa kuzisombululo zayo ze-IC drive. Amafomu womkhiqizo afaka phakathi imikhiqizo ejwayelekile ye-SMD DOB, uchungechunge lomkhiqizo wochungechunge lwe-AC-COB. Kusetshenziswa isikimu sedrayivu eqondile, enephuzu elinciphayo, eliphansi lezimpawu ze-flash point. Imikhiqizo yochungechunge lwe-AC-COB ehlanganisa ubuchwepheshe be-flip-chip COB nobuchwepheshe bemodyuli ye-AC inezinzuzo ezizimele zeShineOn, ingasetshenziswa njengomkhiqizo oyinhloko wokuqinisa ukumaketha. Isixazululo se-flash frequency frequency ...
I-Flexible LED Tape Uchungechunge Lwamanje Oluqhubekayo
Incazelo Yomkhiqizo Ububanzi bephalethi yombala we-single way dimmer ngu-2000K-3000K. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu emakethe yasekhaya, futhi amandla angaphansi kwama-20W. Kungukushintshwa okuqondile kwamalambu wesibani amancane anciphayo namalambu e-halogen. Isicelo: imakethe enikezela ngempahla ekhaya - okusekelwe emalambini asekhaya, amalambu aphansi, amalambu odonga, amalambu etafula eliseceleni kombhede nokunye okunjalo okusemqoka ● Inkomba ephezulu ye-CRI / Rf / Rg (TM-30-18) ● Ubude obukhulu bokugijima amamitha ama-5 ● I-Spectrum ephelele Ama-LED angama-2835 ● Uniform, ulayini oqondile ...